कोरोना महामारी : इटलीको बेर्गामोमा एउटा पूरै पुस्ता नै स्वाहा ! - Sidha News
कोरोना महामारी : इटलीको बेर्गामोमा एउटा पूरै पुस्ता नै स्वाहा !
एजेन्सी। गाड्नका लागि ठिक्क पारेर राखिएका कफिनहरूको लामै लाइन देखिन्छ । घरैमा मृत्यु भएकाहरूका लाशलाई सीलबन्दी गरिएका कोठामा लुकाएर राखिएको छ । अन्तिम संस्कार सेवा दिनेहरूले इटलीको बेर्गामो प्रान्तमा निकै संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।
अहिलेसम्म कोभिड–१९ ले ३४ सय ५ जनाको ज्यान लिइसकेको छ र सबैलाई मृतकलाई कुनै समारोह नगरिकन गाडिएको वा जलाइएको छ । अस्पतालमा मर्नेहरू एक्लै मरिरहेका छन् । उनीहरूका सामान झोलामा राखेर उनीहरूकै कफिन नजिक राखिएका छन् । पछि अन्तिम संस्कार गराउनेहरूले कफिनलाई संकलन गर्ने गरेका छन् ।
लोम्बार्डी क्षेत्रमा रहेको बेर्गामोमा एक करोड २० लाख मानिस बस्छन् । त्यहाँ बुधवारसम्ममा १९ सय ५९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर बनेपछि बुधवार राति सेनालाई बेर्गामो शहरको चिहानबाट ६५ वटा कफिन हटाएर मोदेना र बोलोग्ना लग्न बोलाइएको थियो ।
उक्त क्षेत्रका सबभन्दा ठूलो फ्युनरल निर्देशक सीएफबीले मार्च १ बाट ६०० वटा अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।
‘सामान्य महिनामा हामीहरू १२० वटा जति अन्तिम संस्कार गर्थ्यौं,’ सीएफबीका अध्यक्ष एन्टोनिया रिकार्डीले भने । ‘दुई हप्तामा एक पूरै पुस्ता नै बितेको छ । हामीहरूले कहिले पनि यस्तो देखेका थिएनौं र यसले गर्दा मलाई रुन मन लाग्छ ।’
बेर्गामोमा लगभग ८० फ्युनरल कम्पनीहरू छन् र प्रत्येकले एक घन्टामा एक दर्जन कल पाउने गरेका छन् । कफिनहरूको अभावमा कफिन बनाउनेहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ । अनि अन्तिम संस्कार गराउनेहरू आफैं पनि संक्रमित भएपछि तयारीमा अवरोध पुगेको छ ।